Semalt ले कसरी SEO मा सर्भर प्रतिक्रिया को प्रभाव वर्णन गर्दछ?
सर्भरहरू इन्टरनेट बनाउने कम्प्युटर हो। तिनीहरू विभिन्न उपकरणहरूमा फरक समयमा वेबसाइटको प्रतिक्रिया निर्धारण गर्छन्। एक साइट पृष्ठ को लोडिंग गति ती विशेष वेबसाइट को स्तर को प्रभावित गर्दछ।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, फ्रान्क Abagnale, फरक स्थिति कोड वास्तवमा तपाईंको SEO को मतलब के हो व्याख्या गर्दछ।
जब प्रयोगकर्ताले लिंकमा क्लिक गर्दछ, सर्भरले हेडर स्थिति फिर्ता गर्दछ, त्यसपछि URL जस्ता जानकारी फिर्ता गर्दछ कि ब्राउजरमा पुग्न प्रयास गरिरहेको छ भनेर संकेत गर्न। यस प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित हुन्छ जबसम्म केहि गलत हुँदैन। सर्भर हेडर स्थिति कोडले प्रयोगकर्तालाई पठाउनको लागि सन्देश निर्धारण गर्दछ; एक अनलाइन शपर पसल
उदाहरण को लागी, तपाइँ संग एक वेबसाइट www.mywebsite.com छ। जब कसैले यस लिंकमा क्लिक गर्दछ, सर्भरले यो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछ र सर्वर हेडर र ब्राउजरमा देखिने HTML कोडको साथ प्रतिक्रिया फर्काउँछ। हेडर "HTTP / 1.1 200 ठीक छ" लाइनबाट सुरू हुन्छ। वेब विकासकर्ताहरूको यी हेडर स्थिति कोडहरूको व्याख्या गर्न ठोस ज्ञान छ। प्रत्येक प्रतिक्रियाको वेबसाईटको एसईओ सम्भावनामा अद्वितीय प्रभाव छ।
राम्रो सर्त कोडहरू
१. २०० २०० ठीक छ। यो एक वेबसाइट मा सबै भन्दा राम्रो त्रुटि शर्त हो। यसको मतलव वेब पृष्ठ सफलतापूर्वक प्रयोगकर्ताको ब्राउजरमा लोड भयो। उदाहरण को लागी, www.mywebsite.com मा शपिंग कसैले यो प्रतिक्रिया देख्न सक्छ जब क्वेरी सही छ। कोड तपाईंको एसईओको लागि राम्रो छ जब खोजी ईन्जिनहरूले देख्छन् कि सबै ठीक छ र प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको पृष्ठ फेला पार्नेछन्।
२. कोड "1०१ चल कुनै आन्दोलन"। यो स्थिति कोड प्रदर्शित हुन्छ जब तपाईले खोजिरहनु भएको सामग्री सारियो। यो तपाइँको वेबसाइट मा यूआरएल मा सामग्री र प्रयोगकर्ता पुन: निर्देशित गर्दछ। यसले यसको अधिकार बढाउनेछ र "२०० ठीक" को धारणा पनि दिन्छ। यस रणनीति लागू गर्नुहोस् एसईओ कुशलतापूर्वक काम गर्न।
खराब स्थिति कोडहरू
१. "2०२ फेला" सर्भर हेडर स्थिति कोड। यो एसईओ प्रयासका लागि धेरै हानिकारक छ। यसको मतलब यसले प्रयोगकर्तालाई नयाँ सामग्रीमा पुनःनिर्देशित गर्दछ। वेबसाइटको लागि जुन ट्राफिकसँग सम्बन्धित छैन, खरीदकर्ता अझै ठीक छ किनकि यसले खरीद गर्दछ। यद्यपि यो त्रुटिले लक्षित पृष्ठलाई आधिकारिक गर्दैन। नतिजाको रूपमा, पृष्ठ रैंकिंग सुधारिएको छैन।
२. 400०० स्तर सर्वर हेडर स्थिति कोड। यदि सर्भर अनुरोध उप्रान्त प्रस्तुत छैन भने यदि यो सामग्री व्याख्या गर्दै छ, यसले "404 फेला परेन" वा "410 गयो" कोड प्रदर्शन गर्न सक्दछ। यो उत्तर विशेष गरी तपाईंको SEO को लागि खराब हो। खोज ईन्जिनले जान्दछ कि प्रयोगकर्ताहरूले कुनै लिई लाभ लिन सक्दैन जब तिनीहरूले यो लिंक क्लिक गर्छन्।
40.०4 वा 10१० त्रुटिहरू। यसले लि authority्क प्राधिकरणमा बाधा पुर्‍याउँछ र तपाइँको हराएको वेब सामग्रीको डिन्डिड्याक्सिफिकेशनको संभावना बढाउँछ। यसको मतलव त्यहाँ टुक्रिएको लिंक छ वा केहि सामग्री हराइरहेको छ। यो एसईओ मा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव छ।
कुनै पनि अनलाइन व्यवसायमा, स्थिर ईन्जिनको उपस्थिति र राम्रो श्रेणीकरणको लागि खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसन महत्वपूर्ण छ। जे होस्, त्यहाँ कुनै सफलता हुन सक्दैन जब एसईओ एक्लो केही खास पक्षहरू छैन। उदाहरण को लागी, सर्भर को प्रतिक्रिया को लागी यी SEO प्रयासहरु मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव छ। माथि देखाईए अनुसार, बिभिन्न प्रकारको स्थिति कोडको मतलब सर्भरमा बिभिन्न दिशा निर्देशनहरू हुन्छन्। तपाईंको एसईओ रणनीतिहरूमा बिभिन्न प्रतिक्रियाहरूले फरक प्रभाव पार्दछन्। माथिको सल्लाहहरू अनुसरण गरेर, तपाईं जाँच गर्न, फिक्स गर्न र सम्भवत: तपाईंको होस्टिंग प्याकेज, विशेष गरी सर्भरमा केहि त्रुटिहरू ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रक्रियाले खोजी ईन्जिनहरूमा तपाईंको साइटको अधिकारलाई मात्र पुनर्स्थापित गर्दछ, तर तपाईंको ग्राहकहरूको प्रवाहलाई पनि सुरक्षित गर्दछ।